Izay taona vaovao, tsy hitondra inona… | NewsMada
Izay taona vaovao, tsy hitondra inona…
Par Taratra sur 02/01/2017
“Hitondra soa sy fanambinana ho antsika rehetra anie ity taona vaovao ity!” Fomba fiarahaba isaky ny tonon-taona toy izao io, mandeha ho azy. Raha ny marina, tsy mitondra inona ny taona. Ny ataon’ny tena no mahasoa na maharatsy.
Fanaovana vina ny taona vaovao: inona no hatao? Mila ihetsehana fa tsy anaovana ariary zato am-pandriana, na atoritoriana fa hisy mpanatitra hena. Miandry ny taona hitondra soa sy fanambinana ny mpanofinofy am-pitoerana, fa tsy mihetsika.
Izay tsy vonon-kanova ny fiainany, hono, ovain’ny fiainany ho azy hanaraka ambokony na araka ny onjany tsy fidiny. Nefa eo amin’ny fiainana, izay mahery sy mandresy no manao ny tantara. Miala miady ny tena, fa tsy ho resy tsy miady.
Ady ny fiainana, ady fiady… Na izany aza, velon-kifanasoa ny olombelona. Tsy hoe samy maka ho azy, na manjaka isam-baravarany na amin’ny faritra kely isiany, dia izay. Eo ny mpiray vodirindrina, ny mpiara-monina, ny mpiray firenena…
Arakaraka ny hakelin’izay fivelaran’ny saina aman-pijerin’ny tsirairay amin’ny manodidina azy izay no iheverany tena ho lehibe na ambony. Tsy inona fa karazana fitokana-monina na fihibohana ihany izany: fitiavan-tena, raha tsorina.
Mafy ny fiainana, sarotra. Amin’ny ankapobeny, iadiana irery matetika. Na tsy misy intsony izay iombonana sy mampiombona. Zava-doza! Indrindra eo amin’ny fifandraisan’ny vahoaka sy ny mpitondra, raha samy maka ho azy…
Efa fototra sy fositra nahatonga ny tsy fifampitokisana sy ny fifandroritan-dava, taon-dasa, raha tsy hiteny afa-tsy ny delestazy, ny tsy fandriampahalemana, ny fanomezana tany ny vahiny, ny harem-pirenena lasa gaboraraka…
Tsy azo leferina intsony, mila fiheverena. Taona itsy, itsy ny lalana; taona ito, ito ny lalana; taona iry, iry ny lalana. Izay miova fitana, hono, lanin’ny mamba. Nefa mety hahafaty mamba ary hiravaka ny vanginy izay miova fitana, raha…
Mitaky fahasahiana izany, fanapahan-kevitra, firaisankina, firosoana… Alao hery àry amin’izao taona vaovao izao!